Maxaa Broadcast ka baran kartaa Hollywood | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » content Delivery » Maxaa Broadcast ka baran kartaa Hollywood
Maxaa Broadcast ka baran kartaa Hollywood
Waxaa qoray Jason Coari, Agaasimaha Suuqgeynta Waxsoosaarka, Quantum
Inta badan taariikhda casriga ah, isbeddelka tikniyoolajiyadeed ayaa ku yimid qaab sidan oo kale ay curinta u horseedayso adeegsiga tikniyoolajiyadda kiisaska adeegsiga oo aad u tiro badan. Dunida otomaatiga, waxaa jiray mar nooc nooc caag ah oo loo adeegsado taayirrada dhammaan xilliyada iyo gawaarida. Sidii ugu dambeeyay ee sannadihii 25 sano ka hor sayniska nolosha, boqolkiiba 99 ee horumarinta dawooyinka ayaa loo qoondeeyay ka-faa'iideysiga tiro badan oo bukaannada ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jiray isbeddel soo-saar ah oo leh taayiro gaar ah oo loo abuuray hagaajinta amniga iyo waxqabadka ku saleysan iyo tiro aad u badan oo miisaaniyada baarista daawada loogu talagalay horumarinta daawada shaqsiyeed.
Waxaa jira is afgarad la isku raacsan yahay in sida ugu badan ee loo beegsan karo tikniyoolajiyadda, ay waxtar u leedahay. Si kastaba ha noqotee, sida horumarintan loo sameynayo, waxaan aragnaa dib-u-gurasho muhiim u ah barashada-edbinta iyo ka faa'ideysiga.
Wax ku ool ah Hollywood
Tani waxay si sii kordheysa looga arki karaa adduunka warbaahinta iyo madadaalada, gaar ahaan markay tahay qaddarinta dhinacyada wax-soo-saarka hal abuurka iyo waxyaabaha ku jira Hollywood. Barashadan waxaa loo adeegsanayaa baahinta - warshado soo food saaraya culeys aad u badan si ay u soo saaraan waxyaabo aad u tiro badan oo ka mid ah barnaamijyada is dhexgalka ee daawadayaasha gaajaysan ee adduunka.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee abuurista waxyaabaha ka kooban is-weydaarsiga ayaa ah saamaynta muuqaalka iyo dhaqdhaqaaqa. Tobankii sano ee la soo dhaafay, intooda badan HollywoodFilimihii ugu xumaa ee ay soo maraan waxay ka kooban yihiin waxyaabo muhiim ah oo labadaba saameyn gaar ah iyo mid muuqaalba ah. Waxaa jira run in qaar ka mid ah filimada, shaqaalaha saameynta muuqaalka ah ay si fudud uga weynaan karaan shaqaalaha ficilka tooska ah, isla markaana aysan ku dhicin in saameynta muuqaalku ay ku kici karto ugu badnaan miisaaniyad filimka. Hollywood ayaa si gaar ah loogu dhiirrigeliyay in geeddi-socodka waxsoosaarkan looga dhigo sida ugu hufan ee suurtagalka ah.
Iyada oo adeegsiga guud ee sii kordheysa loo adeegsado ee istuudiyaha ciyaaraha fudud ee baahinta isboortiga, qayb muhiim ah oo ka mid ah baahinta ayaa lagu dhisay karti shaashad ah oo lagu hormariyay shaashadda cagaaran, ka dibna soo saaridda saameynta muuqaalka sareysa waqtiga-dhabta ah. Iyo sababta oo ah baahintu waa tartan dabiici ah, waxaa jira tartan hub si loogu gudbiyo xitaa khibrado dheeri ah oo loogu talagalay dhagaystayaasha, taas oo markaa ka dib quudinaysa rajadooda sii kordheysa. Siyaabo badan, waa jahawareer aan weligiis dhammaanayn oo u baahan in la yeesho saamaynta muuqaalka adduunka ah oo qayb ka ah baahin kasta oo casri ah.
Teknolojiyaddu waxay kor u qaadi kartaa kartida
Soosaarida-waqtiga dhabta ah, xiisaha leh aragtida muuqaalka waxay qaadataa wax ka badan karti hal abuur leh, waxay qaadataa qalab tikniyoolajiyadeed oo la hagaajiyay si wax looga qabto baahiyaha waxqabadka kordhay. Idaacadaha ayaa haddaba adeegsanaya waxa ku soo badanaya dadka Hollywood - shaqo socodsiin wax soo saar oo ay taageerayaan iskudhafyada wax lagu keydiyo ee ku saleysan flash-ka, iyo nidaamyo kaydsi oo xaddidan oo aan xasilooneyn (NVMe) oo salka ku haya - si si wanaagsan wax looga qabto taageerida sheygan wax soo saar.
Xaqiiqdi waxaa jira faa iidooyin ku saabsan adeegsiga tikniyoolajiyadda noocan ah jawiga wax soosaarka. Bilowga, adeegsiga NVMe waxay awood u siineysaa saameynta muuqaalka ah in si dhakhso leh loo abuuro madaama howlihii shaqo wareejinta aysan sugi doonin inay qoraan kaydinta kaydinta. Jawiga tijaabada ee dhowaan lagu qaaday istuudiyaha muuqaalku wuxuu hagaajiyay waqtiyada wax lagu soo bandhigo iyadoo loo eegayo 10 marka la barbar dhigo kaydinta caadiga ah ee lagu habeeyay qalabka adag ee 10K SAS. Joogitaanka mawduuca waxqabadka, marka la eego tirada sii kordhaysa ee dhacdooyinka warfaafinta ee lagu qabtay kaamirooyinka xallinta sare (sida sanadka dambe ee Tokyo Olimbikada lagu dhajinayo wadan ahaan 8K), tafatirka muuqaalkan wuxuu u baahan yahay nooca waxqabadka - ku dhawaad ​​10GBs socodka qulqulka wax ka yar 16msms in aan jaranjarooyinka la dhigin - wax yar oo nidaamyo ah ayaa keeni kara. Xalalka kaydinta casriga ah ee NVMe, sida QuantumNidaamka 'F2000', wuxuu taageeri karaa tifatirida 8K 60FPS waxyaabaha ka kooban hal nidaam oo ah 2U.
Faa'iidooyinka habdhaqanka ugu wanaagsan
Xaqiiqdu waxay tahay in awood u siinta ku-dhaqanka ugu wanaagsan ay dhab ahaan u mari karaan labada qaabba. Idaacadaha, gaar ahaan marka ay baahinayaan dhacdooyinka cayaaraha tooska ah, waxay had iyo jeer la tacaamulaan caqabadaha la xiriira in boqolkiiba boqol wax soo saarkooda ay tahay in meel fog laga qabto. Tani waxay u baahan tahay fududeynta xiriirinta shabakada iyo kharashkeeda laxiriirta, sidaa darteed culeyska xoogan ee wariyaasha badankood u saaraan wax soo saarka dhamaan kaabayaasha IP-ga, iyo sidoo kale iyagoo awood u leh in tikniyoolajiyadooda lagu gayn karo meelaha ka yar deegaanka bey'adda gacanta ku hayaan xarunta xogta shirkadaha. Iyada oo qaddarka sii kordhaya ee filimka laga sameynayo goobaha qalaad ee adduunka, Hollywood si fiican ayey uga faa iidaysan karaan khibradda noocan ah ee wax soo saarka fog. Qaddar weyn oo wax ku ool ah ayaa lagu kasbadaa iyadoo la sameeyo dib u habeyn badan oo gudaha ah halkii si joogto ah loogu celinlahaa ubaxyo deegaanka jawi la wadaago. Xaqiiqdii, The Rebel Fleet, oo ah shirkad soosaara xiisaha leh oo ku saleysan New Zealand, ayaa caawinaysa Hollywood taas kaliya samee.
Hal shay ayaa si cad u cad - haddii aad tahay warbaahin weyn, istuudiyaha filimada caanka ah, ama xirfadle kasta oo ku xeel dheer mihnadda warbaahinta, si joogto ah wax u barashada iyo u furnaanshaha fikradaha cusub waa shuruud si aad u gaarto heerarka ugu sarreeya ee awoodda ganacsi oo aad naftaada ka sii horreyso tartanka. Waana nabad in la yidhaa dhamaanteen kama faa iidaysan karno tikniyoolajiyadda loo sameeyay kiiskeena gaarka ah, laakiin sidoo kale waa horumarinta iyo khibradda ay bixiyeen jaarkayaga warshadaha sidoo kale.
Ku saabsan Jason Coari
Jason Coari waa QuantumAgaasimaha Suuqgeynta Badeecadda iyo halyeeyga kombiyuutarka xisaabinta iyo warshadaha kaydinta, oo leh waayo-aragnimo ka badan 20 sano 'oo ka shaqeynayay labada urur ee qalabka iyo barnaamijyada softiweerka. Wuxuu hogaamiyaa istiraatiijiyada ganacsiga ee shirkada ee xalinta xalal kaydinta kaydinta dhamaan warshadaha. Markii hore, wuxuu ka soo shaqeeyay doorar kala duwan oo caalami ah SGI, isagoo si gaar ah u hago istiraatiijiyadda suuqgeynta wax soo saarka HPC iyo hogaaminta ururada suuqyada Yurub iyo APAC.
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Broadcast-SocialMeida tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw SJGolden - Waran & Fallaaro kaydinta Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TVU Networks Video Engineer 2019-12-09
Previous: Cingularity wuxuu u xushaa PHABRIX Sx awood iyo xariir idaacadaha isboorti